ဆူးနဲ့ဝေဒေါ့ကွန်း အဟက်ခံရခြင်း S&W | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဆူးနဲ့ဝေဒေါ့ကွန်း အဟက်ခံရခြင်း S&W
ဆူးနဲ့ဝေဒေါ့ကွန်း အဟက်ခံရခြင်း S&W
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 27, 2011 in Community & Society, Computers & Technology, News | 12 comments
ရွာသားအပေါင်းတို့ ကျုပ်တို့ရဲ့ဘော်ဒါ အန်တီဆူးနဲ့အန်တီဝေတို့ရဲ့ ဆိုက်ကို ကျားသစ်မဲကနေ ဟက်ထားတယ်။ အခုပဲသူ့တို့ဆိုက်ကို တက်လိုက်တော့ this site hacked by black jaguar ဆိုပြီးကစားနေနဲ့ လူမျက်လုံးပုံပေါ်နေတယ်။ သူတို့ဆိုက် လိပ်စာက http://www.sueweiwei.com/
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကြံညဏ် အားပေးစကားများ ပြောလိုက်ကြပါအုံး။ ကျုပ်ကတော့ အားပေးတာကလွဲလို့ ဘာမှမပြောတတ်ဘူး။
ဘာတွေဖြစ်တာလဲ နားမလည်လို့ အကြံဥာဏ်မပေးတတ်ဘူး မမတို့ရေ.
တတ်သိနားလည်တဲ့ မိတ်ဆွေများ ကူညီပေးကြပါရန်…
အီဖေကိုယ် မဟက် (ဟပ် မဟုတ်) တတ်ပါ။ ဟီးဟီး…။
ကြည့်ရတာ.. အဓိကဒိုမိန်း ဟက်ခံရတယ်ထင်တယ်..။
ထားတဲ့ဆာဗာထဲ .. ၀င်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ..။
အိ်ုင်ပီစစ်ကြည့်တော့ .. မနောဖြူရော..။ ဆူး-ဝေရော ထားတဲ့နေရာက တူနေတယ်..။
ဒေတာဘေ့စ်ကို ဘက်ကပ်မလုပ်ထားရင်တော့ ရေးသမျှ ပြောင်ပဲ..။
ဟက်တဲ့ ဟက်ကာက မစ်ဒယ်အိစ်ကဖြစ်ပုံရတာမို့ .. သာဓုတော့ ခေါ်မယ်မထင်..။
အား……. မနောရဲ့ဆိုက်ထဲမှာလဲတွေ့တယ် ကြောက်စရာကြီးနော်
မဝေပြောတော့ ပိုက်ဆံပေးပြီးလုပ်ထားရတဲ့ ဆိုက်ဆို …။ ဒါဆိုရောင်းတဲ့လူ က တာဝန်ရှိတာပေါ့.. ။ ၀ယ်ထားတာ တစ်လတောင်မပြည့်သေးဘူးပဲ ဒီလိုဖြစ်တာ သူပြန်ရှင်းပေးသင့်တာပေါ့ ။
မန္တလေး ဂေဇက်လိုပဲ… ဂေဇက်အမာခံ အစ်မနှစ်ယောက်လုပ်ထားတဲ့ ဆိုက်မို့ ၀င်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ… ခရီးသွား၊ ဟင်းချက်၊ အတွေးတွေ စုထားတဲ့ ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်လို့ အစ်မတို့အစား နှမျောမိပါတယ်… ပြန်ရပါစေဗျာ…
ပြန်ရတော့မှာပါ ညီမလေးနဲ့ မမဝေရေ ဆာဗာကို ပြန်ကြိုးစားနေတယ်……. ဆိုက်ကိုလည်း ဆာဗာပြန်ချိန်းပေးမယ်ထင်တယ်။ မနောက ဆိုက်တစ်ခု ဂျွန်ဘဲလားနဲ့စမ်းနေတာ တစ်ခုကျန်သေးတယ်။ ဒေတာတွေသာ သေချာမထည့်ရသေးတာ။
အားပေးတဲ့ ဦးကြောင်ကြီး အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟိုမှာ တင်တာ ဒီမှာ ရှိတယ်။ ဒေတာ အတွက်တော့ စိတ်မပူပါဘူး ဂေဇတ်ကြီး ပျက်မှ ဒေတာ အတွက် နှမြောရမှာ.. ဒီမှာ ဦးနှောက်ထဲက ထွက်တာတွေ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတယ်။ ပျောက်သွားရင်တော့ နောက်ထပ် ပြန်ရေးဖို့ မလွယ်လောက်ဘူး။
ဆိုက်က ဆာဗာကို တိုက်သွားတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကြားမိတာ ကိုပေါက်မန်း ရဲ့ ဆိုက်လည်း ဟတ်ခံရတယ်လို့ ပြောတယ်။
မနေ့က ဖွင့်တုန်းက ရသေးတယ် ကွန်မန်း ဖတ်ပြီး ချက်ချင်း ပြန်ရေးတင်ပြီး အန်တား ခေါက်လိုက်တော့ ဟတ်တယ် ဆိုပြီး စာတမ်း ပေါ်လာတယ် မဟတ်ခင် မိနစ်ပိုင်းအထိ သုံးနေမိသေးတယ်။ ဟတ်တဲ့ အတွက်တော့ စိတ်မပူပါဘူး အဆင်ပြေမှာပါ။
အခုလိုစိတ်ပူပေးကြတာတွေ့ရတော့ ကျေးဇူးလဲတင်တယ် .. အားလဲရှိသွားပါတယ် …
တစ်ပတ်လောက် ခရီးထွက်သွားလိုက်လို့ ရွာထဲကို မလာဖြစ်တာနဲ့ ဒီရွာလဲ တော်တော်ပြောင်းလဲနေသလိုပဲနော် …
ဒေါ် ဆူးဟင်း ချက်နည်း တွေ လို ချင် လို့ လား အန်တီ ဝေ ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှာ ရတနာသိုက်မြေပုံ တွေ.သွားလို့လားမသိဘူး
ဆူး တင်ထားတဲ့ အာဠာဝက ကို တမ်းတမ်းစွဲသွားလို့ ခဏသိမ်းပိုက်သွားတာ ဖြစ်မယ်။